May | 2011 | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
Posted on May 31, 2011 by chitnge
အခေါင်မြတ်ပန်း အောင်ပန်းမွှေးလှိုင်ကြူ ( ဒေါက်တာချစ်ငယ် ၏ ငယ်မူ ကလောင်ခွဲ လက်ရာများ ) အပိုင်း(၁) နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ မည်သူရောက်မည်နည်း။ နိုင်ငံခြားသား များကတော့မူ နိဗ္ဗာန်၌ ဘာမျှမရှိ။ ထို့ကြောင့်မသွားချင်ဟု ဆိုကြပြန်သည်။ တချို့ကလည်း နိဗ္ဗာန်ကို ငါမရောက်၊ သူမရောက်။ ထို့ကြောင့် နိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်အောင် မလိုက်စား မကျင့်ကြံလိုပါဟု ဆိုကြပြန်သည်။ နိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်သူသည် `ငါ´ ၊ `အတ္တ´ မဟုတ်။ ထိုနည်းအတူ သူတစ်ပါးလည်း မဟုတ်။ ထို့ကြောင့် နိဗ္ဗာန် … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်, အတ္တ	| 1 Comment
About the Life after death
Posted on May 18, 2011 by chitnge
About the Life after death Once I realized the world take interest in three topics such as … 1) The Nature of Non-ego 2) The Nature of Nibbana 3) About the Life after death As for me, my intellectual level … Continue reading →
Scientific method is limited concerning the knowledge of the world beyond …
Scientific method is limited concerning the knowledge of the world beyond … Scientist Hawking declares in his book “Grand Design” that it is not necessary to invoke God … to get the universe going. He simply and openly said “there … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, English Posts, Science	|2Comments
The power to penetrate the true nature of beings
Posted on May 17, 2011 by chitnge
The power to penetrate the true nature of beings Searching for knowledge is essentially interested for human beings. They search for knowledge along the history of mankind. In short, it will study the method of attaining truth. There can be … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Buddhism and Science, English Posts	| Leaveacomment
အသိပညာဉာဏ်တည်ဆောက်သည်ဆိုရာဝယ် .. ..
အသိပညာဉာဏ်တည်ဆောက်သည်ဆိုရာဝယ် .. .. လောကီ ကိစ္စ၀ိစ္စတို့၌ သိပ္ပံပညာရပ်သည် အဓိကပိုင်းမှ ပါဝင်သကဲ့သို့ ရှိသည်။ အများသူငါသည် သိပ္ပံပညာကိုလွန်စွာ တန်ဖိုးထားသည်။ တန်ဖိုးထားရအောင်လည်း သိပ္ပံပညာက လူသားတွေ၏ အသုံးအဆောင်နှင့် ပတ်သက်၍ဖြစ်စေ အစစအရာရာ များစွာအကူညီ အထောက်အပံ့ ပေးသည်။ ထို့ကြောင့် သိပ္ပံပညာ၏ လွှမ်းမိုးမှုသည် ဤခေတ် ဤအခါ၌ အံ့သြဖွယ်ရာ ကောင်းသည်။ သို့သော် သိပ္ပံနည်းဖြင့် အသိပညာ ရှာဖွေရာဝယ် မြင်သာသမျှသာ အကန့်အသတ်နှင့် မြင်ရသည်။ မမြင်သာသေးသည်များ ရှိသေးကြောင်းကို သိပ္ပံက နားမလည်နိုင်။ … Continue reading →
Posted on May 13, 2011 by chitnge
ယနေ့ထုတ် (၁၃-၀၅-၂၀၀၁) သောကြာနေ့ မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာပါ DVD ကြော်ငြာ ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် — လေးစားစွာဖြင့် Admin (chitnge.com) Tags: Announcement
Posted in Buddhism	| Tagged Announcement	| Leaveacomment
Posted on May 8, 2011 by chitnge
လက်တွေ့ကျင့်ကြံအားထုတ်မှု၏တန်ဖိုး သစ္စာဝါဒီများ – လက်တွေ့ကျင့်ကြံအားထုတ်မှု၏ တန်ဖိုးကို ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်နှင့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပြောဆို ဆွေးနွေးကြဖို့ လိုအပ်သည်။ သစ္စာဝါဒီများ – အကျင့်ဟာ အဆုံးအဖြတ်ပါ။ လောကကြီးမှာ သိပြီး မကျင့်တာတွေလည်းရှိတယ် ဘာလုပ်မလဲ .. .. အကျင့်က အဆုံးအဖြတ်ပြုတာ – ဒါကို တိုးတက်တဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းတွေက လက်ခံကုန်ကြပြီ။ ဒီခေတ်ဒီအခါမှာ လက်တွေ့ကျင့်ကြံ အားထုတ်မှုနဲ့ လက်တွေ့ဖြတ်သန်းမှုတွေရဲ့ တန်ဖိုးဟာ အရမ်းကြီးမားနေပြီ။ ဒါကို ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ပြောနိုင်ဖို့လိုတယ်။ ကျွန်တော်က ၀ိပဿနာ နယ်ပယ်မှာ လက်တွေ့ကျင့်ခဲ့လို့ … Continue reading →
Whether you believe it or not ….
Posted on May 7, 2011 by chitnge
Whether you believe it or not …. Dear Michel, You said “I’m really sorry to say this” that my article is disgraceful. Actually you should not feel sorry because it may be true to you. I don’t feel sorry whether … Continue reading →
တရားရှုသာရှုပါ .. ..
Posted on May 6, 2011 by chitnge
တရားရှုသာရှုပါ .. .. သစ္စာဝါဒီများ – သစ္စာဝါဒီများက အမြဲတမ်း နားလည်ပေးနေတော့၊ သာဓုခေါ်ပါတယ်။ မိမိမှာလည်း ၀ိပဿနာအကြောင်း ပြောရာက တစ်ခါတစ်ခါ အတိုက်အခံတွေ ဖြေရှင်းနေရတာနဲ့ ၀ိပဿနာက လစ်လပ်သွားတာလေးတွေ ရှိပါတယ်။ နားလည်ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ၀ိပဿနာဆိုတာ အထူးရှုရတာပဲ .. .. ရှုသာရှု – ရှုတယ်ဆိုတာ ပျက်တယ်လို့ ကောက်ချက်ချတာပါပဲ။ ရင်ချိုင့်မှာပဲရှု ယောဂီများ .. .. သူများတွေ ဘယ်နေရာရှုရှု – သူများတွေနဲ့ လုပ်မနေနဲ့တော့၊ သစ္စာဝါဒီများကတော့ ရင်ချိုင့်မှာပဲရှု။ … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged ၀ိပဿနာ, Buddhism, Myanmar Posts, စိတ္တာနုပဿနာ, ဓမ္မာနုပဿနာ	| Leaveacomment